न्यायिक समितिबिना नै फैसला : उपाध्यक्ष मायादेवी न्यौपाने
जेठ १, २०७५ | नुवाकोट (किस्पाङ)
प्रतिबद्धता, सीप, लगनशीलता र निरन्तरताको अभाव नै असफलता हो । असफलता नै सफलताको आधार र बिन्दु हो । जीवन सङ्घर्षशील छ । जीवन एक चुनौतीपूर्ण पनि छ । यसलार्इ छिचोल्न सके सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । करिब साढे दुई दशक राजनीतिक यात्रापश्चात पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन् मायादेवी न्यौपाने । उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट किस्पाङ गाउँपालिकामा निर्वाचित कुशल, सक्षम र सामाजिकमैत्री जनप्रतिनिधि हुन् । उनी वि.सं. २०५४ मा साविक काहुले गाविस वडा ९ बाट महिला सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
कार्यकालको एक वर्षमा न्यायिक सम्पादन सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू स्थानीय तहबाटै मिलाएको अनुभव सुनाइन् । आफू पाको उमेरको पनि भएर पनि होला- ‘जे गर्नुछ, त्यही मात्रै बोल्ने स्वभावले न्यायिक सम्पादन गर्न सकेको अनुभव सुनाइन् ।’ चुनावी घोषणापत्रमा भएको सबै उद्घोष पूरा गर्न नसके पनि सबै जनताको सेवामा अग्रसर रहने बताइन् । सम्भवत: सबै जनताको सेवक र ऋणी भएर काम गर्ने बताइन् ।
गाउँपालिकामा महिलालाई सीप सिकाएर दक्ष र सक्षम बनाउने योजना रहेको उपाध्यक्ष न्यौपाने बताइन् । यहाँको भाैगोलिक बनावटको अाधारमा कफी, अलैंचीलगायतको अनुदानमा जोड दिने उनले बताइन् । यसवर्ष धेरै बजेट सडक संजाल विस्तारलाई भएको हुँदा अरुमा पर्याप्त बजेट छैन, तैपनि योजनाअनुरुप कामकारबाही भने अघि बढाइएको कार्य अनुभव सुनाइन् ।
यही गापाभित्र रहेको फिकुरीलाई पर्यटन क्षेत्र बनाएर आन्तरिक तथा बह्या पर्यटक भित्र्याउने गुरु योजना अनुसार सडक संजाल फैलाउने योजना रहेको बताइन् । वडा नं. ५ देखि १ सम्म फिकुरी जाने सडक मार्ग बनाउने र त्यहीँबाट पैदल मार्ग बनाएर पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको उपाध्यक्ष न्यौपानेले बताइन् । त्रिशुली ३ ‘ए’ र ३ ‘बि’ हाइड्रोपावरले गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने आधार रहेको सुनाइन् ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायत सबै व्यवस्थित गर्दै लैजाने उनले बताइन् ।
संघीय संरचनाको प्रारम्भिक चरण भएकोले सिंहदरबार गाउँगाउँमा आएपनि स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । एेन, कानून बन्ने क्रम पनि जारी रहेकाले न्यायिक मामिला समिति बिनानै एक्लैले केश फैसला गर्नुपरेको गुनासो उनले सुनाइन् ।
२०७२ को भूकम्पले तहसनहस बनाएको किस्पाङ तङ्ग्रिदै गरेको छ । अहिले ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा आवास निर्माण सकिएको र गुम्बा, मठ मन्दिर, स्कुल लगायत सांस्कृतिक सम्पदा पनि पुनःनिर्माण भइरहेको उपाध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।
(सैलुङअनलाइनले गरेको प्रत्यक्ष कुराकानीमा)